USTHANDWA Nzuza owayengumsakazi woKhozi FM uvulele umyeni wakhe uMfundisi Philani Gama icala lokushaya, waphinde wabhoboka kuleli phephandaba ngomendo wakhe. Isithombe: YOUTUBE
ZINHLE HLUBI noS'MANGELE ZUMA | February 24, 2020
UBHOBOKE okokuqala ngokuhlukunyezwa nangesibhaxu somyeni wakhe owayengumsakazi woKhozi FM, uSthandwa Nzuza, obeshade nomfundisi wodumo uMfundisi Philani Gama.
NgoNovemba nyakenye, leli phephandaba labika ngezinkinga ezikhungethe lo mshado nezinsolo zokuthi uSthandwa uyahlukanisa kodwa waphika.
Lo mfundisi webandla iChristian Fellowship, kuthiwa muva nje ushaye uSthandwa wamvala iso kulandela ingxabano ababe nayo eyagcina ekutheni aze aphahlaze iselula yakhe.
USthandwa uvulele uGama icala lokushaya emaphoyiseni aseHillcrest, waboshwa wasevela eNkantolo yeMantshi ePinetown ngecala lokushaya.
Kuthiwa uGama uma eshumayela muva nje esontweni, uneka uSthandwa ebandleni njengomuntu ongaziphethe kahle futhi ohlulwe wumendo.
Ethintwa, uSthandwa obengafuni ukukhuluma ‘ngezindaba’ zakhe, uthe akulona iqiniso okushiwo ngaye. Udalule ukuthi into emkhiphe emzini wakhe yisibhaxu. Uvumile nokuthi kunecala lokushaya alivulele umyeni wakhe.
“Ukushaywa yikhona okungikhiphe emzini wami... Angithandi ukukhuluma ngezindaba zami zangasese kodwa-ke kuliqiniso ukuthi umyeni wami ngimvulele icala lokushaya. Wudaba olubucayi lolu ngoba baningi abantu abathintekayo, imindeni nezingane. Bengithule sonke lesi sikhathi ngingasho lutho ngoba ngivikela izingane zami,” kusho uSthandwa.
Uthe into emphatha kabi kakhulu wukuthi ngoLwesibili odlule, uGama bekumele ayovela eNkantolo yeMantshi yasePinetown kodwa wafike watshelwa ukuthi idokodo lecala lakhe lilahlekile.
Lokhu uthe kumdumazile kakhulu ngoba kumvezela ukuthi umthetho wakuleli awubavikeli abantu besifazane abahlukunyezwayo. Uqhube wathi useyalele abameli bakhe ukuthi balusukumele lolu daba.
Ethintwa uGama, wale waphetha ukuphawula ngalezi zinsolo, wathi akuthintwe uSthandwa.
“Uma nifuna ukukhuluma nami ngezinto ezithinta umkami, ngicela nixhumane naye. Niyamazi, ningakhuluma naye. Uma kunezikhalazo zebandla, nginganixhumanisa nebhodi lebandla,” kusho uGama ngaphambi kokuvala ucingo.
USTHANDWA Nzuza owayengumsakazi woKhozi FM uvulele umyeni wakhe uMfundisi Philani Gama icala lokushaya, waphinde wabhoboka kuleli phephandaba ngomendo wakhe
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa aseHillcrest aphenya icala lokushaya.
“Umlisa oneminyaka engu-48 uvulelwe icala lokushaya yinkosikazi yakhe ngoJanuwari 18 ebusuku. Uvele okokuqala eNkantolo yeMantshi yasePinetown ngoJanuwari 21, icala lahlehliselwa uFebruwari 18,” kusho uGwala.
UGwala uthe basaphenya ngezinsolo zokulahleka kwedokodo ngoba akulula ukuthi alahleke njengoba esegcinwa ngobuchwepheshe besimanje bama-khompyutha nokubhalwa phansi.
Umthombo ongaphakathi esontweni uthe lezi zinsolo zokushaya zigcine zifikile ezindlebeni zebandla.
“USthandwa kuthiwa wafika emaphoyiseni evuvukele iso ezovula icala, wabika nokuthi ucingo lwakhe luphahlazwe phansi wumyeni wakhe emshaya. Ngakusasa wabe esebuyela khona futhi emaphoyiseni eyocela ukuthi amphelezele ayolanda izimpahla zakhe kwakhe ngoba esaba ukuya khona yedwa,” kusho lo mthombo
Kubikwa ukuthi ebandleni umfundisi akayiphathi eyokuvulelwa icala lokushaya.
“USthandwa siyamthanda futhi ungumama wethu ebandleni, kusiphatha kabi okumehlelayo. Okungimangazayo nokuyikho okungihlukumeza kakhulu emoyeni wukuthi umfundisi uma phambi kwebandla asole uSthandwa ngokungaziphathi kahle,” kusho lo mthombo.